Ahoana ny fomba fanesoana amin'ny Photoshop | Famoronana an-tserasera
Lola curiel | | General, Fitaovana famolavolana, Photoshop, Tutorials
Amin'ny tontolon'ny famolavolana sary, rehefa miresaka momba ny fanesoana isika dia miresaka momba ny fanesoesoana izay mampiseho ny fomba hampiharana endrika iray raha ny tena izy. Tena ilain'izy ireo izy ireo satria manampy anay hahafantatra raha tena miasa tokoa ny zavatra noforoninay ary, raha miasa ho an'ny mpanjifa izahay dia manampy azy ireo hahafantatra ny ho endrik'ilay asa ataonao amin'ny fanohanana ara-batana. Amin'ity lesona ity dia hasehoko anao ny fomba fanaovana mockup ao amin'ny Photoshop. Na dia hampiasa crème crème iray aza izahay dia hianatra teknika azo ampiharina amin'ny karazana zavatra rehetra. Aza hadino izany!
1 Inona no ilainao hatao maneso amin'ny Photoshop?
2 Sokafy ny modely fanesoana ary safidio ilay zavatra
3 Mamorona sosona loko fanamiana
4 Manampia marika amin'ny fanesoana anao
5 Farano ny fanesoanao
Inona no ilainao hatao maneso amin'ny Photoshop?
Ny zavatra voalohany ilainao dia a modely fanesoana izay hampiharantsika ny volavolainay, dia ho hitanao maro karazana amin'ny banky sary maimaimpoana toy ny Pexel na Pixaby. Inona koa mila iray ianao weft mamorona marika ary sary famantarana. Raha mbola tsy anananao ny sary famantarana anao dia azonao atao ny manatona an'ity tutorial ity ny fomba famoronana sary famantarana amin'ny Adobe Illustrator.
Sokafy ny modely fanesoana ary safidio ilay zavatra
Andao atomboka manokatra ny modely fanesoana. Ampiasao avy eo ilay fitaovana fifantenana zavatra mifidy ny vilany fanosotra. Aza avela handao ny halo amin'ny safidinao amin'ny alàlan'ny fandeferana "Selection", "modify", "develop" ary hanitatra azy 2 pixel (eo ho eo).
Mamorona sosona loko fanamiana
Ny zavatra manaraka tokony hataonao dia mamorona loko mitovy fanamianaAzonao atao izany amin'ny alàlan'ny fanindriana ny marika miseho voamarika amin'ny sary etsy ambony ary manome azy "loko fanamiana". Satria voafantina ny vilany fanosotra, sarontava no apetraka ho azy eo amin'ny sosona miaraka amin'ity sary nohetezana ity. Miaraka amin'izany, ny azontsika dia ny manova ny lokon'ilay zavatra. Mba hahatonga azy ho azo tanterahina bebe kokoa, handeha ho any amin'ny tontonana voamarika amin'ny sary etsy ambony ianao ary hanova ny fomba fampifangaroana ianao ho an'ny underexposure linear. Farany ampidino ny opacity manomboka amin'ny sosona loko fanamiana ka hatramin'ny 75%.
Manampia marika amin'ny fanesoana anao
Para mamorona ny marikaoilainao mamorona sosona vaovao ary avadiho ho zavatra marani-tsaina. Raha tsindrio avo roa heny eo ianao, mivantana hisokatra ny varavarankely vaovao izay ahafahanao manova ny marikao tsy miankina. Ny zavatra voalohany hataonao dia ny fampiasana ny fitaovana fambolena hampihenana ny haben'ny lamba. Avy eo, hisintona ny kisarisary amin'ny efijery ary ahitsy ny habenyna mifanaraka amin'ny habaka.
Miaraka amin'ny fitaovana mahitsizoro ary mampiasa ny loko fotsy, dia hamorona a ianao mahitsizoro eo afovoan'ny sary (Io no hatao marika). Rehefa manana izany ianao sokafy ny sary famantaranao ary apetraho eo akaikin'ny sisiny havia ny mahitsizoro. Tamin'ny farany, ampiasao ny fitaovana an-tsoratra sy ny lokon'ny sary famantarana manorata ny anaran'ny vokatra. Ao amin'ny bara safidin'ny fitaovana, eo an-tampon'ny sehatr'asa, azonao atao ny manova ny toetoetran'ny lahatsoratra, nampiasa ny font pasifika aho ary nomeko isa 130 ny habeny. Zava-dehibe ny andehananao izao fisie fisie ary kitiho raha tehirizina, raha miverina amin'ny fikandrana rakitra izay nanombohanay niasa, ny fanovana dia hampiharina amin'ny sosona marika.
Farano ny fanesoanao
Hanova ny fomba fampifangaroana marika, safidio indray ny Linear Burn, fa amin'ity indray mitoraka ity dia tsy mila mikasika ny isan-jaton'ny opacity ianao. Izao dia tsy maintsy manitsy fomba fijery, noho izany dia tsy maintsy mankany amin'ny kiheba ianao hanova "," transform "," deform ". Raha tsy manana ireo mpitari-dalana mavitrika ianao, kitiho ankavia ary ampandino azy ireo amin'ny «guide toggle». Ajanona fotsiny ny famindrana ny tahony ampifanaraho amin'ny endrik'ilay fanesoana ilay marika. Ary azonao izany!
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » Ahoana ny fomba fanaovana mockup ao amin'ny Photoshop